Spotify si joogto ah lagu xisaabiyo iyo saaro Spotify
Sida loo Delete Spotify Account joogto ah iyo saar Spotify
Waxaa had iyo jeer u muuqataa macquul ahayn in user a doonayo in la hubiyo in ay adeeg Spotify aan joojiyo oo kaliya balse Chine la xiriira ayaa sidoo kale laga saaray qalabka iyo nidaamka ku saabsan oo loo isticmaalay. Soo saarida arjiga Spotify waa isku mid sida ay ka saareen codsi kasta oo kale oo caadi ah si kastaba ha ahaatee user waa inay hubiyaan in habka la soo sheegnay ee qaybtii dambe ee tutorial taas oo aan la raacin oo keli ah, laakiin waxay sidoo kale codsatay in hab ugu fiican si ay u hubiyaan in user helo natiijada ugu wanaagsan.
Qaybta 1.How in ay tirtirto account Spotify joogto ah
Qaybta 2.How si meesha looga saaro Spotify ka Computer
Spotify Qaybta 3.Removing ka android
Download music Spotify free la TunesGo hor tirtirto account Spotify
1. Sida loo tirtiri account Spotify si joogto ah u tirtirto account Spotify
Waxaa jira waxyaabaha qaar in ay tahay in la tixgeliyo, halka nidaamka la raaco habka ugu wanaagsan oo user Haddaba baahan yahay si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah geedi socodka tahay ma codsatay kaliya laakiin waxa ay sidoo kale la raacay si ay u hubiyaan in baahan yahay waxaa lagu sameeyaa.
Waxa ugu horrayn waxa weeyi in arrintan la xiriira waa in user waa inay hubiyaan in xisaabta la joojiyo iyada oo macmiilka desktop ma lahan heer iyo darajo kasta Times waa sida dhammaan heerarka waxaa lagu joojiyo in si la mid ah sida xisaabta, tijaabo, account premium oo lacag la'aan ah, account arday iyo xisaabta qoyska.
Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in loo hubiyo credit card ama macluumaad la xiriira xisaabta oo kale si loo hubiyo in ay taribuunka Times Spotify burin kastaba ha ahaatee tani khuseysaa oo keliya ka bixiso heysata xisaabta. Eedaymaha loo soo hormariyay hubiyo in xisaabta ayaa la joojiyay si guul ah ka dhigi doonaa.
Waxaa kale oo lagu talinayaa in la hubiyo in habka ah in la hoos ku xusan waxaa la socda habka ugu wanaagsan si ay natiijada noqdo xilliyada ugu wanaagsan oo dhan. Si aad u hubiso in natiijada ugu fiican ee jeer oo dhan waxaa sidoo kale ku taliyey in la hubiyo in user marnaba sababi talaabo kasta oo arrintan la xiriira iyo waxa aad u muhiim ah sidii ay u keeni doonaa user ku wajahan natiijada ugu wanaagsan iyo xisaabta la tirtiro iyada oo aan doonaa sameeyo wax kasta oo arrinta iyo dhibaato.
Si aad ugu isticmaasho habka waxaa sidoo kale ku taliyey in la hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira oo ay si fudud u hubiyaan in geeddi-socodka waxaa laga codsadaa in sida uga wanaagsan ee suurto gal ah in aad ka fogaato wax kasta oo ka kaaftoomi iyo dhammaan tallaabooyinka ku jira sharaxaadda is waana hubaa in user marnaba wajihi arrin kasta oo arrintan la xiriira, marka ay timaado in lagu xisaabiyo tirtirka ka dhigi doonaa:
1. account ayaa Spotify waa in laga heli:
2. saabsan tab waa in la riixi:
3. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in foomka xiriir la furay:
4. user waa in markaas hubiyo in account ka saareen oo la joojiyo la doorto sababta oo ah:
5. user ayaa markaas u baahan yahay si loo hubiyo in Delete aan xisaab Spotify waxaa riixi:
6. user waa in hadda loo hubiyo in sababta ku haboon waxaa sidoo kale la doortay si ay u hubiyaan in arrinta aan la wada cafiyo oo kaliya laakiin ay cabashadu la kiciyey,
7. Su'aasha markaas waa in la qoraa makiinad si loo hubiyo in duurka oo aan ka tagay banaan:
8. button su'aal soo yahay markaas in la riixi si loo hubiyo in la codsado account joojinta la soo diray oo ay tahay in la xuso in habka doonaa kale oo ey isku dhameystiray.
2. Sidee inuu ka saaro Spotify ka Computer
Waxaa la soo sheegnay ka hor iyo weliba in Spotify ma aha in loola dhaqmo sidii adeeg gaar ah iyo in la hubiyo in tirtirka la sameeyo ka madal kasta oo hababka uninstalling caadiga ah aan la codsaday oo kaliya laakiin sidoo kale ay u hubiso in user helo natiijada ugu wanaagsan . Si aad u hubiso in Spotify waa la tirtiraa Xisaabiyaan user waa in raac hanaanka hoose oo aan gefo talaabo kasta oo la sameeyo:
1. user wuxuu u baahan yahay si ay u helaan guddi ay gacanta si loo hubiyo in hannaanka waxaa keena
2. Laga waxaa user ay u baahan tahay in ay doortaan uninstall ah tab barnaamij si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo:
3. button uninstall waa in la sii adkeeyey ka dib xulashada codsiga Spotify si loo hubiyo in nidaamka halkan hasa
3. ka iPhone ka saarida Spotify
Waxaa sidoo kale waa hab fudud oo hab dhaqanka la halkan ku xusan doonaa:
1. user waxay u baahan tahay inay hesho oo qaban codsiga si loo hubiyo in hannaanka loo bilaabo:
2. Isticmaalka markaas u baahan yahay in la hubiyo in badhanka cross la isku soo riixayo iyo user helo oo dhakhso ah sida si fiican.
3. Habka delete waa in lagu soo xulo si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo iyo nidaamka halkan hasa
Codsiga waxaa halkan ku xusan ayaa loo isticmaalo ujeeddooyin demo iyo user wuxuu u baahan yahay si loo hubiyo in nidaamka la mid ah ayaa sidoo kale soo qaaday codsiga Spotify si wixii kaloo ay si fudud u sameeyey.
Spotify oo laga tagayo android
Geedi socodka ee ay ka saareen Spotify u fiirinayaan android sidoo kale waa mid ka mid ah fudud iyo user xaqa u baahan yahay si loo hubiyo in hannaanka uninstall codsiga sida caadiga ah waxaa la socda in la hubiyo in wixii kaloo la sameeyo hab ugu fiican. Waxa kale oo hubin doona in user helo natiijada ugu fiican ee wax waqti ah oo dhan, iyo arrimaha kale ee la xidhiidha ku saabsan codsiga gudahood ayaa sidoo kale lagu xalin khalkhal badan aan.
1. Play Store Google waa in laga heli:
2. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in icon ku iftiimiyay la isku soo riixayo,
3. barnaamijyadooda My markaas waa in la soo xulay:
4. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in codsiyada lagu rakibay iyadoo la furay, ka dibna codsiga Spotify ku yaal iyo uninstalled waayo, waxyaalaha wanwanaagsan ee user iyo sidoo kale nidaamka. Waxaa ka dhigi doonaa oo keliya ma aha hubiyo in codsiga la tirtiray, laakiin waxa ay sidoo kale xaqiijin doona in user ayaa guul ah lagu fuliyay hawsha si fudud oo ku qanacsan. Mar kale codsiga uu soo bandhigay halkan waa kaliya ujeeddooyin info iyo isku-socodka khusaysaa Spotify sidoo.
> Resource > Spotify > Sida loo Delete Spotify Account joogto ah iyo saar Spotify